Isitshixo sikaSanta Benedict ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
La Isitshixo sikaSanta Benedict Yinto engcwele kunye nenkolo eyaziwayo njengophawu lokuvula iingcango kunye neendlela ezinzima. Kweli nqaku siza kukubonisa intsingiselo yalo kunye nendlela yokuyinxiba njengekhubalo.
Ukukhuselwa ngeSitshixo se-Saint Benedict
1 Intsingiselo yeqhosha likaSanta Benedict
2 Imbali yesitshixo seSan Benito
3 Intsingiselo yobuso bembasa
3.1 Ubuso I
3.2 Ubuso II
4 Ukusetyenziswa kwesitshixo sikaSanta Benedict
Intsingiselo yeqhosha likaSanta Benedict
Yinto yenkolo esetyenziswa njengophawu lobuKristu ukuvula iingcango kunye neendlela ezinzima. Inokhuseleko olukhulu kwi-hexes, kumona, iqhuba amandla amabi kwaye itsale elungileyo. Inokhuselo olukhulu kwizifo kwaye ikhusela abo basempilweni entle ukuze bangaphulukani nayo.
Ukukhuselwa kufuneka kubekwe njengoko benditshilo esifubeni, nokuba ukubakhona kuzisa izibonelelo zokomoya. Kule meko iCawa yamaKatolika yamkela Isitshixo sikaSanta Benedict Kwaye isetyenziswa njengomqondiso wosindiso nokuhlangulwa kubo bonke ububi.
Kwiqhina lesitshixo ngu Imbasa ye-Saint Benedict, eyimbasa yomthendeleko yobuKristu kwaye inomfanekiso ka-Saint Benedict wase-Nursia kunye nomnqamlezo kwelinye.
La Isitshixo sikaSanta Benedict Isetyenziswa ngamarhamente ahlukeneyo anje ngamaRoma Katolika, ama-Anglican Katolika, imibutho ethile yamaLuthere, amaWisile, kunye ne-Orthodox yaseNtshona.
Imbasa ye-Saint Benedict efumaneka kwiqhosha yenye yezona zindala kwiNgqobhoko kwaye abo bayinxiba ngokuthembekileyo bakholelwa kumandla ayo nxamnye nobubi.
Imbali yesitshixo seSan Benito
Kufuneka sikhumbule ukuba uSanta Benedict wazalelwa e-Italiya kwisixeko esibizwa ngokuba yi-Nursia ngo-480, udadewabo uScholastica wabungcwalisela ubomi bakhe kuThixo kwaye naye waba yiNgcwele. Ummangaliso wokuqala ka-Saint Benedict kuxa wayenceda umfazi owayezisola ngokuqhekeza ivazi yelinye ilizwe, waziva enemfesane, wamthandazela, wamsikelela lo mfazi ulusizi emva koko ivazi eyaphukileyo yafunyanwa intsha.
Emva kwexesha elide, wathatha isigqibo sokuzahlukanisa nabantu kwaye waya kuhlala kwindawo engabemi ukuba azinikele ekuthandazeni, kulapho ke apho amadoda aliqela, abaleka kubomi besixeko, afumana uSanta Benedict kwaye waba mkhulu abalandeli beemfundiso zakhe.
Nangona kunjalo, uSanta Benedict wayengenabo abalandeli abanobuhlobo okanye abathembekileyo ngalo lonke ixesha, ngenye imini, abanye abalandeli abangaqanjwa ngamagama, bamnika ukuba atye asele iglasi yewayini kunye nesonka esinetyhefu, kodwa wathi akusikelela esi sidlo ikomityi yabhabha yaya ewakeni. iziqwenga.
Emva kokuzibona esemaphethelweni ukufa U-Saint Benedict uthathe isigqibo sokuhamba nabanye babafundi bakhe bokwenyani esiya e-Monte Casino kwaye emva kokuba egqibe ukuzila ukutya iintsuku ezingama-40, wagqiba kwelokuba akhe indlu yoonongendi, apho waseka khona i-Community of Benedictines ngonyaka ka-530. Emva koko, imimangaliso yoku Saint yaqala ukubonakala. Nangona kunjalo, ngonyaka wama-543, nge-21 kaMatshi, wabizwa ukuba ahlangane noThixo ezulwini.
Bathi ngonyaka we-1415 eminye imibhalo-ngqangi yafunyanwa ichaza isimboli ebhalwe kwimedali eyenza i Isitshixo sikaSanta Benedict, kodwa ngo-1880 xa kwakukhunjulwa ishumi elinesine leminyaka yokuzalwa kwakhe, owayelilungu eliphakamileyo lendlu yoonongendi wenza olu phawu lwaziwa.
Intsingiselo yobuso bembasa
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, Isitshixo sikaSanta Benedict Inombhalo wemedali enobuso obubini kwaye ubuso nganye inentsingiselo yayo ekhethekileyo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba de kwaba sisikhumbuzo seminyaka eli-1400 sokuzalwa kuka-Saint Benedict esasisaziwa xa sifumana ezinye iincwadi, yintoni intsingiselo yobuso bobabini. Sichaza apha ngezantsi:
Kweli cala unokufumana iLa Cruz. Inamagama okuqala eCSSML amileyo I-Crux Sacra Hlala Ukukhanya kweMihi (Ngamana uMnqamlezo oyiNgcwele ungaba kukuKhanya kwam). Kwaye ngokuthe tye, kukho ii-initials NDSMD ezithetha Indawo engeyiyo iDraco Hlala Mihi Dux eguqulela ekubeni uMtyholi angabi sisikhokelo sam.
Kwindlela efanayo yezandla zewotshi ngasemdeni, oonobumba bokuqala bamagama athi "Suka Sathana, ungandicebisi ngezinto ezingento, Kubi oko undinika kona, Sela ityhefu yakho ngokwakho."
Obunye ubuso bubonisa umzobo ka-Saint Benedict ephethe umnqamlezo ngesandla sakhe sasekhohlo, ngelixa ngesandla sakhe sasekunene ebambe uMthetho oyiNgcwele, lo ngumthetho odumileyo nonamandla awubhalileyo ngokwakhe kwaye unemithetho esibhozo engenakuphikiswa ekufuneka yenziwe Yenziwe yazaliseka luluntu lonke olungokholo lwamaKatolika.
Ibinzana elijikeleze imbasa kweli cala lobuso “Eius eóbitu nostro presents muniámur " Oko kukuthi: Ngexesha lokufa ubukho bakho buyasikhusela. Nangona kunjalo, kwezinye iimedali unokufunda kuphela "Sanctus Benedictus ”.
Xa ujonga ngokusondeleyo umfanekiso wobuso, unokufumana unomyayi emazantsi ngasekhohlo ophethe isonka ngomlomo wakhe, oku kunika intsingiselo kukutya okutyhefwe nokunikwa uSanta Benedict. phelisa ubomi bakhe.
Ngasezantsi ngasekunene, kukho iglasi eyaphukileyo ekwabhekisa kwiwayini enetyhefu eyenziwe ngcwele ukuba idubule umthandazo wentsikelelo awamnika wona xa babemnikele ukuba bambulale.
Ukusetyenziswa kwesitshixo sikaSanta Benedict
Amagunya amaninzi abanjelwe imbasa yale ngcwele, apho esona sipho siphambili kunye nesona sibalulekileyo ebantwini abasisebenzisayo kukugxotha umtyholi kunye nezilingo zakhe. Ihlala isetyenziselwa ukoyikisa imimoya emdaka kwaye isetyenziswa ngabefundisi be-exorcist, ikwanceda ukunqanda uloyiko lwento, isebenza njengekhaka nxamnye nobubi kodwa kufuneka uyinxibe ngokholo olukhulu nangokuzinikela.
Siyakumema ukuba undwendwele eli khonkco lilandelayo ukuze wazi i Umthandazo onamandla ku-Saint Benedict ukuze uhlale uyiphatha kunye neli likhubalo likhulu ngokwasemzimbeni nangokomoya.